ထိုင်းရောက်ITလူငယ်များ: March 2013
http://www.facebook.com/groups/ ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ
ဒီblog ထဲက post များကို ပြန်လည်ကူယူဖော်ပြပါက post ရေးသားထားတဲ့ သူတွေကို အားပေးသည် အနေဖြင့် Credit ပြန်လည်ပေးကြပါရန် အနူးအညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာ
iphone 4/4s Lock phone တွေကို Factory Unlock လုပ်တဲ့ဈေးနှုန်းလေးများ
ထိုင်းမှာ လက်ရှိ iphone 4/4s Lock phone တွေကို Factory Unlock လုပ်တဲ့ဈေးနှုန်းလေးသိခြင်လို့ မေးထားတဲ့ ဘော်ဒါများအတွက် ဈေးနှုန်းလေးတွေ တင်ပြပေးထားတာပါ
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 6:10 AM 1 comment:
Labels: Apple, Unlock
Oppo mobile X 9015 (find 3) ကို root လုပ်နည်း
Oppo mobile x 9015 (find 3) ကို root လုပ်နည်းမေးထားတဲ့ဘော်ဒါတွေ အတွက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
ကဲ root မလုပ်ခင်အရင်ဆုံး usb settings တွေ ၀င်ပြင်းထားပါ ပြီရင် Cwm recovery mode သွင်းပြီ
root ရမှာဖြစ်တဲ့ အတွက် ဖုန်းကို driver အရင်သွင်းထားရပါမယ်
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 1:09 PM3comments:
Labels: Oppo, Oppo Root လုပ်နည်း
Android phone တွေ patten lock ကျပြီ စိတ်ညစ်နေတဲ့ သူအတွက်
Android phone တွေ patten lock ကျပြီ စိတ်ညစ်နေတဲ့ သူအတွက်ပြန်တင်ပေးလိုက်တာပါ
သိတဲ့သူတွေက လွယ်ပေးမဲ့ မသိသေတဲ့ သူတွေအတွက် တောတောတိုင်ပတ်နေတက်ပါတယ်
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 11:36 AM No comments:
Labels: Phone နည်းပညာများ, reset ပြန်ချနည်း
FIFA 12 (Android HD Game)
Posted by လူဆိုးလေး အောင်ကျော် at 10:48 AM2comments:
Order & Chaos Duels ( Android HD Game)
online game တွင်လူကြီုက်များတဲ့ စစ်တိုက် game လေးပါ ရုပ်ထွက် အရမ်းကောင်းပါတယ်
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 2:46 AM No comments:
Samsung Galaxy SL Gt-i9003 ကို CWM recovery နှင့် root လုပ်နည်း
Samsung Galaxy SL Gt-i9003 ကို CWM recovery နှင့် root လုပ်ခြင်တဲ့ ဘော်ဒါများအတွက်
အရင်ဆုံး cwm သွင်းဖို့computer မှာ samsung usb driver ကိုသွင်းထားပေးရပါမယ် ပြီရင် cwm သွင်းဖို့ လိုအပ်တာတွေ ဒေါင်းလိုက်ပါ
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 2:26 AM No comments:
Labels: Samsung, Samsung Root လုပ်နည်း
Subway Surfers ( PC Game )
ipad တို့android tablet တွေပေါ်မှာ လူကြိုက်များတဲ့ game လေးကို အခု cmputer အတွက်ထွက်လာပါပြီ
အရမ်ဆော့ကောင်တဲ့ game လေးပါ လိုခြင်သူများ အောက်ကနေဒေါင်းလိုက်ပါ
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 12:32 PM No comments:
Ravensword: Shadowlands (Android HD Game)
ဘာ game လဲလို့ မပြောတောဘူနော် အရမ်လန်တယ် ဆော့ခြင်ရင်ဒေါင်းလိုက်နော်
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 12:18 PM No comments:
Samsung galaxy SL GT- i9003 ကို offical firmware ပြန်တင်နည်း
Samsung galaxy SL GT- i9003 ကို offical firmware ပြန်တင်ခြင်တဲ့ဘော်ဒါများအတွက် ဒီနည်းအတိုင်လုပ်ဆောင်သွားပါ လိုအပ်တဲ့ driver တွေကိုတောအရင်သွင်းထားပါ
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 8:08 AM No comments:
Labels: Samsung, Samsung Firmware တင်နည်း
ကဲဒီတစ်ခါ ဘော်ဒါတွေဖုန်းကို စေတနာနဲယူကလိပြီ အခန့် မသင့်လို့logo ကနေ boot ပြန်မတက်လို့ 
တိုင်ပတ်နေတက်တဲ့ ဘော်ဒါများဆောင်ထားသင့်တဲ့ software လေးပါ ဖုန်းတောတောများများကို
reboot ပြန်ခေါ်လို့ ရပါတယ် ကိုreboot ပြန်ခေါ်မဲ့ ဖုန်းရဲ့ driver ကိုအရင်သွင်းထားရမှာပါ ကျန်တဲ့ဟာတွေလဲလုပ်ဆောင်လို့ ရပါသေတယ်
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 1:55 AM No comments:
k-touch w806 ကို root လုပ်နည်း
k-touch w806 ကို root လုပ်ခြင်တဲ့ ဘော်ဒါများအတွက် အကိုကြီး (Nay Myo)
အရင်းဆုံး အရေကြီးတာ K-touch ရဲ့ usb driver ပါ ဒီကောင်ကိုအရင်ဒေါင်းပြီ သွင်းပေးလိုက်ပါ
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 1:08 AM 1 comment:
Labels: K-touch, K-touch root လုပ်နည်း
i mobile iQ6 version 4.1.1 ကို root လုပ်နည်း
i mobile iQ6 version 4.1.1 ကို root လုပ်ခြင်တဲ့ဘော်ဒါများ မေးထားကြာပါပြီ ဒါပေမဲ့ တစ်ခြာလွယ်လွယ်ကူကူလုပ်တဲ့နည်းမတွေ့ သေပါ ဒါကြောင့် လက်ရှိလုပ်နည်းတစ်နည်းဘဲ ရှိပါသေတယ်
ဒါကတော cwm ကနေသွင်းပြီ root ရမှာဖြစ်သဖြင့် cwm firmware အသစ်ပြန်တင်ရမှာပါ ဒါကြောင့်
လုပ်သင့်မလုပ်သင့် သင်ကိုယ်တိုင် စဉ်စာဆုံဖြတ်ပြီမှ လုပ်ကြပါ
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 1:40 PM3comments:
Labels: i mobile, i mobile Root လုပ်နည်း
I Phone 3G,3Gs တို့ ကို ဘထ္တရီး ဖြူတ်လဲနည်း
I Phone 3G,3Gs တို့ ကို ဘထ္တရီး ဖြူတ်လဲဖို့အရင်ဆုံး ဒီပစ္စည်းတွေ လိုအပ်ပါတယ် ဒီပစ္စည်းတွေ
ရှိမှ ဖြုတ်တဲ့နေရာမှာ ဘာမှ အခက်အခဲ မရှိမှာပါ
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 7:47 AM No comments:
Labels: Apple, ဘထ္တရီး ဖြုတ်လဲနည်း
Nokia Phone နဲ့Network ချိတ်ဆက်နည်း
ကဲ တစ်တစ်ခါ ဘော်ဒါတစ်ယောက်မေးထားလို့nokia phone နဲ့ network ချိတ်ဆက်နည်းကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ် ဒီနည်းက တောတောများများသိကြပါတယ် မသိသေတဲ့
ဘော်ဒါများအတွက် ရည်ရွယ်ပြီ ရေပေးလိုက်ပါတယ် ကဲအရင်ဆုံး မိမိဖုန်းနဲချိတ်ဆက်မဲ့ USB ကြိူးတောရှိရပါမယ်
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 5:14 AM No comments:
Labels: Network ချိတ်ဆက်နည်း, Nokia
HEROES OF DESTINY ( Android HD Game )
Android HD Game ကောင်ကောင် ကြိုက်တဲ့ ဘော်ဒါများအတွက် တင်ပေးလိုက်တာပါ
အက်ရှင်game တွေ ကြိုက်တဲ့ ဘော်ဒါများ အတွက် တောတောဆော့လို့ ကောင်တဲ့ game ပါ
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 7:35 AM No comments:
Sony Xperia miro ကို root လုပ်နည်း
Sony ရဲ့ဖုန်းတွေထဲမှာ အသစ်ထွက်ပြီ ဈေးလဲသိပ်မကြီးဘဲ သုံးလို့ လဲအဆင်ပြေတဲ့
sony xperia miro တွေကို root လုပ်ကြည့်ရအောင် root လုပ်ဖို့ ကအရင်ဆုံ ဖုန်းကို
unlock bootloader လုပ်ထားရပါမယ်
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 6:36 AM No comments:
Labels: SONY, Sony Root လုပ်နည်း
Sony Xperia E Dual ကို Root လုပ်နည်း
Sony phone တွေထဲက ဈေးပေါပြီ အသုံးပြုလို့ အဆင်ပြေမယ့် Sony Xperia E Dual ကိုဝယ်လာပြီ
Root လုပ်မရလို့စိတ်ညစ်နေတဲ့ ဘောဒါများ အတွက် တင်ပေးလိုက်ပါသည် အခုတစ်လော အနည်းငယ်
အလုပ်ရှုပ်နေလို့blog ဘက်မလှည့်ဖြစ်တာပါ ကဲ root လုပ်ဖို့လိုအပ်တာတွေ ဒေါင်းထားလိုက်ပါ
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 11:42 AM No comments:
Sony Xperia phone တွေကို Unlockbootloader လုပ်နည်း
နောက်ထွက်တဲ့ Sony Xperia phone တွေကို root လုပ်ဖို့ အတွက်အရင် Sony Ericssonတွေလိုလွယ်လွယ်နဲ root လုပ်လို့ မရတော့ပါဘူ Sony phone တွေ Root
ဖို့ အတွက်အရင်ဆုံး ဖုန်းကို unlockbootloader လုပ်ရပါမယ် unlockbootloader
လုပ်ရတဲ့ အကြောင်ရင်ကတော sony ကုမဏီ ဆီကနေ root လုပ်ဖို့ ခွင့်ပြုချက်တောင်တာဘဲဖြစ်ပါတယ်
root လုပ်ပြီတဲ့ဖုန်းကတော အာမခံ ပျက်မှာပါ လုပ်သင့်မလုပ်သင့် ကိုယ်ဟာကိုဆုံဖြတ်ပါ root လုပ်ဖို့ 
နောက်ထပ် လိုအပ်တာက root ဖိုင်းရယ် Driver ဖိုင်တွေပါ အရင်ဆုံး ဒီကောင်ကိုဒေါင်လိုက်ပါ
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 10:51 AM No comments:
Labels: SONY, Sony Unlockbootloader လုပ်နည်း
Wifi Protector Software ( PC App)
Wifi Protector အသုံးပြုပြီးတော့ Public hotspot တွေပေါ်က မိမိရဲ့အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုကို ကာကွယ်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် တားမြစ်ခံထားရတဲ့ ရုပ်ရှင်တွေနဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေကိုလည်း ချိတ်ဆက်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ဝက်ဘ်အသုံးပြုမှုတွေကိုလည်း bank-level 256 bit encryption စနစ်နဲ့ကာကွယ်ထားနိုင်ပါတယ်။
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 9:35 AM No comments:
Speed MP3 Downloader(install ထည့် နည်း video)
အင်တာနက်ထဲက Mp3 သီချင်း သပ်သပ်ကို စိတ်ကြိုက် ရှာဖွေ ဒေါင်းယူပေးနိုင်တဲ့ Mp3 Downloader လေးပါ ... မြန်မာ Mp3 သီချင်းတွေက အစ အလွယ်တကူဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်.... Latest Version ပါ...။
- is reallyahear-and-get tool, via which you can fast obtain unlimited amount of high quality MP3. It has the largest collection of high quality music, and allows you to search your favorites in tags, such as indie, hip-hop, classical. etc. Speed MP3 Downloader isasimple and neat utility for indexing and downloading your favorite music from Internet. The application is so user-friendly that anybody can use it; it just takesafew clicks and less than5seconds to bring you the search results.
Posted by Zawlin at 8:32 PM No comments:
UnLock Root v 3.36 Pro ကို Full Version ရပါပြီ
Android ဖုန်းတွေကို Root လုပ်တဲ့နေရာမှာ သိပ်ကို စွမ်းပြီး လူတိုင်း လိုချင်နေကြတဲ့ Unlock Root နောက်ဆုံးထွက် ဗားရှင်း 3.36 Pro ကို Full Version ရပါပြီ... Unlock Root 3.36 မှာ Free Version Version နဲ့ Pro Version ရှိပါတယ်.. Unlock Root ထုတ်တဲ့ ကုမ္ပဏီက Unlock Root Pro နဲ့ Root လို့မရတဲ့ Android ဖုန်းဆိုတာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ မရှိဘူးလို့ ကြွေးကြော်ထားတာပါ.. Unlock Root Pro ကို ဒေါင်းခွင့်သာပေးထားပြီးတော့ Full Version ကို ၀ယ်ယူခွင့်သာပေးထားတာပါ.. Pro Version ကို Trial အနေနဲ့တောင် စမ်းသုံးခွင့်ပေးမထားပါဘူး.. ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ ကီးတောင်းတော့တာပါပဲ.. ကဲ ကျွန်တော့်ဆီက Full Version ကို စိတ်ချလက်ချသာသုံးကြပေးတော့.. Full Version ဖြစ်အောင် လုပ်နည်းကို အောက်မှာ ဖေါ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် သေသေချာချာ ဖတ်ပေးကြစေလိုပါတယ်..
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 4:29 AM No comments:
Labels: Android Root Tool
Bagan Innovation Technology မှ Android Phone နှင့် Tablet များအတွက် မြန်မာလက်ကွက်စနစ်( Zawgyi Font )နှင့် English လက်ကွက်စနစ်ပူးတွဲပါရှိသော Bagan Keyboard (BETA) version ကို စတင်ထုတ်ဝေလိုက်ပါသည်။ Bagan Keyboard အားအောက်ပါ link တွင်ရယူနိုင်ပါသည်။
Bagan Keyboard ၏ ထူးခြားချက်များမှာ-
၁။ မြန်မာလက်ကွက်နှင့် English လက်ကွက် ကိုကြိုက်နှစ်သက်ရာ တစ်မျိုးစီဖြစ်စေ ၊ နှစ်မျိုးစလုံးဖြစ်စေ ရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Posted by Zawlin at 9:16 PM No comments:
Labels: Android App, font နှင့် keyboard သွင်းနည်း
Samsung Galaxy Grand Duos I9082 ကို Root လုပ်နည်း
Samsung Galaxy Grand Duos I9082 ကို root လုပ်ခြင်တဲ့ ဘောဒါများအတွက် တင်ပေးလိုက်တာပါ Galaxy Grand root လုပ်မရသေဘူလာ နေ့တိုင် chatbox ကနေ မေးနေတဲ့ ညီမလေး(......) အလုပ်မအားတဲ့ ကြာကတင်ပေးလိုက်ပြီနော် ကဲ တစ်ခြာ ကျွန်တော် ဘော်ဒါတွေ လဲ ဒိနည်း အတိုင် root လိုက်လုပ်နိုင်ပါတယ် လိုအပ်တဲ့ ဖိုင်းများအောက်ကလင့်ကနေ ဒေါင်းယူလိုက်ပါ
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 10:24 AM No comments:
i mobile inote2 wifi tablet ကို root လုပ်နည်း
i mobile inote2 wifi ကို root လုပ်ခြင်တဲ့ ဘောဒါများ အခက်ခဲ ဖြစ်နေတဲ့ ဘောဒါများ အတွက် အလွယ်တစ်ကူ
root လို့ အဆင်ပြေ အောင် ကျွန်တော် ဒီပို့ကို video ဖိုင်းနှင့်တစ်ကွ တင်ပေးလိုက်တာပါ root နည်းက
အာလုံးသိပြီတဲ့ အတိုင် unlockroot pro v.3.36 root tool ကို အသုံးပြုပြီ root ဖောက်လိုက်တာပါ
အရေကြီးတာက root မလုပ်ခင် android driver အရင်ရအောင် သွင်းရပါမယ်
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 10:25 AM No comments:
၀င်းကမ္ဘာကျော် ( နည်းပညာ )
AIS LAVA (8)
China Clone (14)
G Net (1)
i mobile (38)
True GoLive (8)
Phone Root လုပ်နည်းများ
Android Root Tool (5)
Asus Root လုပ်နည်း (8)
China CloneRoot လုပ်နည်း (4)
HTC Root လုပ်နည်း (3)
i mobile Root လုပ်နည်း (11)
K-touch root လုပ်နည်း (1)
Lenovo Root လုပ်နည်း (2)
Oppo Root လုပ်နည်း (2)
Samsung Root လုပ်နည်း (17)
Sharp Root လုပ်နည်း (1)
Sony Root လုပ်နည်း (3)
Sony Unlockbootloader လုပ်နည်း (2)
font နှင့် keyboard သွင်းနည်း (3)
IOS Firmware တင်နည်း (1)
Jailbreak လုပ်နည်း (4)
Nokia Myanmar font သွင်းနည်း
Phone Firmware တင်နည်းများ
AIS LAVA Firmware ပြန်တင်နည်း (5)
Cherry Mobile Firmware ပြန်တင်နည်း (2)
China Clone Firmware တင်နည်း (6)
G Pad firmware ပြန်တင်နည်း (1)
Huawei firmware တင်နည်း (1)
i mobile firmware ပြန်တင်နည်း (24)
java phone တွေ firmware တင်နည်း (2)
JFone Firmware ပြန်တင်နည်း (1)
K-touch Firmware တင်နည်း (2)
Lenovo Firmware တင်နည်း (3)
NEX Mobile Firmware တင်နည်း (1)
Nokia Firmware တင်နည်း (4)
Oppo Firmware တင်နည်း (2)
Samsung Firmware တင်နည်း (14)
Sony Firmware တင်နည်း (3)
True GoLive Firmware တင်နည်း (3)
Zte Firmware တင်နည်း (4)
internet browser ဆိုင်ရာ (3)
Network ချိတ်ဆက်နည်း (7)
reset ပြန်ချနည်း (6)
USB Driver များ (1)
USB Driver သွင်းနည်း (1)
ဘထ္တရီး ဖြုတ်လဲနည်း (1)
Phone App များ
iphone 4/4s Lock phone တွေကို Factory Unlock လုပ်တ...
Android phone တွေ patten lock ကျပြီ စိတ်ညစ်နေတဲ့ ...
Samsung Galaxy SL Gt-i9003 ကို CWM recovery နှင့်...
Samsung galaxy SL GT- i9003 ကို offical firmwareြ...
Sony Xperia phone တွေကို Unlockbootloader လုပ်နည်း...
Apple Hardware (1)
Apple ID ဖွင့်နည်း (3)
Asus Firmware ပြန်တင်နည်း (5)
China Tablet Firmware ပြန်တင်နည်း (1)
Country Code ကြည့်နည်း (1)
Firmware Backup ပြန်ထုတ်နည်း (1)
Firmware DVD များ (2)
imei ပြန်ရေနည်း (4)
LG Root လုပ်နည်း (2)
Moborobo PC Suite (1)
Nokia Myanmar font သွင်းနည်း (6)
Nokia X Root လုပ်နည်း (2)
Phone နည်းပညာများ (7)
TrueSmartPhone Firmware ပြန်တင်နည်း (4)
TWZ Firmware ပြန်တင်နည်း (4)
Unlockbootloader လုပ်နည်း (1)
Zte Firmware ��������������������� (1)